Iji eriri USB ibudata data n'ụzọ dị mfe
Obere nha, eserese zuru ezu
Nke a dị nnọọ mfe ọnụ ụzọ counterkwadoro naanị batrị. Ọtụtụ n'ime anyị Ọnụ ụzọ ọnụ ụzọ bụ ngwaahịa ikike ikike. Iji zere mpụ, anyị etinyeghị ọtụtụ ọdịnaya na webụsaịtị. Ị nwere ike ịkpọtụrụ ndị ọrụ ahịa anyị ka ha ziga gị ozi zuru ezu gbasara anyị ọnụ ụzọ counter.
Ọnụ ọgụgụ nke ndị njem na-aga ugbu a bụ onye ndu kachasị na ahịa. N'okpuru mmetụta nke mpaghara mpaghara, gburugburu ebe obibi, okporo ụzọ na ihe ndị ọzọ, a pụrụ ime nyocha na ọnụ ọgụgụ nke ọnụ ọgụgụ nke ndị njem na-aga n'ụzọ dị irè na nkà mmụta sayensị na n'ụzọ dị irè, na mkpebi ọrụ na ahịa dum nwere ike ime n'oge kwesịrị ekwesị, nke abụrụla. nkwalite. Ọrụ dị mkpa nke ụdị ahịa ahịa ahịa, iji usoro sayensị na-anakọta data ndị njem bụ ụzọ isi ghọta ohere azụmahịa nke ahịa dum.
HPC001 ọnụ ụzọ ọnụ ụzọ bụ ngwaọrụ na-agụta ọnụ ụzọ ndị njem. Ọ dị obere, dị ọkụ ma dịkwa mfe ịwụnye. Ọ na-enyekwa njikwa data zuru oke. Iji gboo mkpa dị iche iche nke ndị ahịa, a na-etinye ya ma jiri ya na nnukwu ụlọ ahịa, nnukwu ụlọ ahịa, na ọnụ ụzọ ụlọ ahịa niile. Mepụtara, HP001 ọnụ ụzọ counternwere ike ịgụta ọnụ ọgụgụ ndị njem n'ụzọ dị mfe n'oge ọ bụla n'ụbọchị, nke dị mma inye ndị na-ere ahịa usoro ntụaka. Site na mgbanwe nke njem ndị njem, enwere ike kesaa mpaghara niile n'ụzọ ziri ezi, enwere ike ịhazi ọrụ mmadụ n'ụzọ ezi uche dị na ya, na enwere ike ịchịkwa ụgwọ ọrụ nke nnukwu ụlọ ahịa na nnukwu ụlọ ahịa. Site n'ịtụle njem ndị njem n'oge dị iche iche, enwere ike gbanwee usoro ịzụ ahịa na nkwalite, nke na-abawanye mmasị nke nnukwu ụlọ ahịa. Ọ dabara maka ebe a na-ere ahịa, ebe ọdịnala na egwuregwu, ebe ntụrụndụ, ebe ọha na eze na ebe ndị ọzọ.
Atụmatụ ọnụ ụzọ ọnụ ụzọ HPC001
1. HPC001 ọnụ ụzọ counter bụ n'asụsụ abụọ eji arụ ọrụ, Chinese na Bekee.
2. 1.15 inch LCD ihuenyo.
3. Nke ọnụ ụzọ counter Enwere ike dochie batrị kwa ọnwa isii maka ịrụ ọrụ, nke dị mfe ma dị mfe.
4. Ntọala na njikwa dị mma, nke nwere ike ịrụ ọrụ site na bọtịnụ na counter.
5. Nke ọnụ ụzọ counter Naanị mkpa ịrụ njikwa counter site na Windows, ọ nweghị ngwanrọ ọzọ achọrọ.
6. Obere nha (113 * 67 * 20 mm) na ịdị arọ 213 grams.
7. The ìhè na ọnụ ụzọ counter ngosi ga-enwu mgbe mmadụ gafere.
8. Ngwa ngwa ga-apụta na ngosi mgbe batrị dị ala.
9. Mkpesa ga-apụta na ngosi mgbe mgbaàmà adịghị ike.
10. Na-agụkarị n'ime oke mita 2.5, mana enwere ike ịkwalite ya na mita 9 na-enweghị nnyonye anya.
11. Nke ọnụ ụzọ counter Ebe nchekwa dị n'ime nwere ike ịchekwa opekata mpe awa 500 nke ndekọ.
12. Enwere ike ịhọrọ ntọala plastik na ngwaọrụ etiti na-achọsi ike.
13. Nke ọnụ ụzọ counter Enwere ike wepụta data site na ụbọchị na oge.
Anyị nwere ọtụtụ ụdị IR ọnụ ụzọ counter, 2D, 3D, AI ọnụ ụzọ ndị mmadụ counter, a na-enwe mgbe niile nke ga-adabara gị, biko kpọtụrụ anyị, anyị ga-akwado ihe kachasị mma ọnụ ụzọ counter maka gị n'ime awa 24.
MRB ụzọ ndị mmadụ na-emegide vidiyo HPC005
Nke gara aga: MRB akpaka ndị mmadụ counter HPC005S
Osote: MRB retail trafic counter maka ndị na-ere ahịa na-agụ HPC002
ọnụ ụzọ counter
Ọnụ ụzọ ndị mmadụ Counter
ọnụ ụzọ ndị mmadụ na-agụta
ọnụ ụzọ ndị mmadụ na-agụta usoro
ndị mmadụ na-atụgharị n'ime ụlọ
ndị mmadụ na-atụgharị n'èzí
Sensọ Counter ndị mmadụ